आज प्रणय दिवस, नेपासहित विश्वभर एकअर्काप्रति प्रेम साटासाट गरी मनाइँदै - नेपालबहस
आज प्रणय दिवस, नेपासहित विश्वभर एकअर्काप्रति प्रेम साटासाट गरी मनाइँदै
२ फागुन, काठमाडौं । आज प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन्स डे, नेपासहित विश्वभर एकअर्काप्रति प्रेम साटासाट गरी मनाइँदैछ । हरेक वर्ष १४ फेब्रुअरीका दिन प्रेमीप्रेमिकासँगै आफन्त र परिवारजनमा प्रेम, सद्भाव र भातृत्व साटासाट गरी प्रणय दिवस मनाउने गरिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा प्रणय दिवसका नाममा विकृति बढ्न थालेको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ । प्रेमका पक्षधर सन्त भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको सम्झनामा प्रणय दिवस मनाउन थालिएको बताइन्छ ।
यो दिवस अहिले विश्वभर चर्चित छ । भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको १४ फेब्रुअरीमा भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउने गरिएको छ ।
क्यान्भासमा पोतीएका महजोडी १९ घण्टा पहिले
पर्यटकको आकर्षण बन्दै छहरा झरना १९ घण्टा पहिले
बेवारिसे शव जलाउने विनयजंगविरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा १ दिन पहिले
नेपाल बैंकका अध्यक्ष मधु मरासिनीले लिए शपथ ३ दिन पहिले
१३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन सर्वोच्चको आदेश ४ दिन पहिले
समर्थकले लगाए नारा, खड्ग ओली बाइबाइ २ हप्ता पहिले
लकडाउनले नछोएको आरन व्यवसाय : मासिक ५० हजार आम्दानी ९ महिना पहिले
खगेन्द्रको जाउँ डाँडै काटेर सार्वजनिक ३ महिना पहिले
अब मलाई २०–२५ वर्ष केही हुँदैन ! २ वर्ष पहिले
१२ हजार किसानको करोडौं रुपैयाँ लुट्ने उखु मिल, बिचौलियाको राज कहिलेसम्म ? २ महिना पहिले